Trump oo Wax Ka Bedel Ku Sameeyay Weerarradii Mareykanka ee Soomaaliya | Baligubadlemedia.com
Trump oo Wax Ka Bedel Ku Sameeyay Weerarradii Mareykanka ee Soomaaliya
January 11, 2019 - Written by admin
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo markii uu xafiiska la wareegay xoojiyay weerarrada xagga cirka ah ee ay Mareykanka ka fuliyaan dalka Soomaaliya, waxaana la filayaa in sannadkan 2019-ka ay sare u sii kacaan.
La taliyaha dhinaca amaanka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa mar uu bishii Disembar jeedinayay khudbad ku saabsaneyd howlgalladooda ka dhanka ah kooxaha ay dagaalka kula jiraan ee ku sugan Afrika waxa uu yiri: “kooxaha argagixisada ah ee ka howl gala Afrika waxay si joogto ah u bartilmaameedsadaan muwaadiniinta Mareykanka ah iyo danaha dowladdeenna”.
Waxa uu si cad u sheegay ineysan marnaba khafiifin doonin dagaalka ay kula jiraan kooxaha mintidiinta ah, sida xarakada Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay dalka Soomaaliya, oo xiriir toos ah la leh ururka Al-Qaacida.
Bishii Maarso ee sannadii 2017-kii ayey waaxda gaashaan dhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ka heshay Aqalka Cad ansixin ku aaddan in la sii ballaariyo dagaalka ka dhanka ah kooxda xag jirka ah ee ku sugan waddanka ku yaalla geeska Afrika.
Image caption Ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa iska kaashaday weerarro ka dhan ah Al-Shabaab
Taliyeyaasha ayaan hadda u baahneyn iney fasax u raadsadaan duqeymaha waaweyn ee lala beegsado deegaannada ka tirsan gudaha Soomaaliya ee lagu tuhmo iney dagaallameyaasha Al-shabaab ku sugan yihiin ama dhaqdhaqaaqyo ka sameynayaan.
“Waxay arrintaas noo samaxeysaa in inaan meelaha qaar u weerarno hab ka fiican sidii hore” ayuu yiri Janaraal Thomas Walhauser oo ka tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika, oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaanno (Africom).
Ansixinta Aqalka Cad ayaa sii kordhisay duqeymaha loo adeegsado diyaaradaha, iyo sidoo kale in markii ugu horreysay ciidamo dhinaca dhulka ah la geeyo Soomaaliya tan iyo sannadkii 1993-kii.
Ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya la geeyay ayaa dhinaca la talinta ka caawinaya ciidanka dowladda Soomaaliya.
Africom ayaa sannadkii 2018-kii oo kaliya Soomaaliya ka fulisay 46 weerar oo xagga cirka ah, kuwaasoo la xaqiijiyay, halka sannadkii 2017-kiina ay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen 38 weerar, sida laga soo xigtay ururka baaritaanka saxaafadda ee (BIJ).
Image caption Milatariga Soomaaliya ayaa weerarro kala kulmay Al-Shabaab
Weerarrada qaarkood ayaa galaaftay nolosha dagaallameyaal fara badan oo isku meel ku sugnaa.
Tusaale ahaan, ku dhawaad 60 ruux ayaa lagu dilay hal duqeyn oo 12-kii bishii Oktoobar ka dhacday meel u dhow degmada Xarardheere oo ka tirsan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Duqeyntaas ayaa ahayd tii ugu dhimashada badneyd ee la fuliyo muddo ku dhawaad 1 sano ah gudaheed.